Dr. Tint Swe's Writings: February 2018
တခုသောကျေးကား ခိုးသားငါးရာနှင့် ပေါင်းမိလေ၏
• ပုလဲမြို့နယ် မင်းရွာကျောင်းမှာ ၂ဝ အလီအထိ အလွတ်ကျက်ခဲ့ရပါ။
• မုံရွာ အထက၊ ဓါတုဗေဒသင်ရတာ ကယ်လစီယမ်မှာ အက်တွန် ၂ဝ ရှိသတဲ့ဗျာ။
• မန်းဆေးကျောင်းမှာ သင်ရပါ၊ မျက်စိအမြင်တိုင်းတာ ၂ဝ/၂ဝ ဟာ ပုံမှန်တဲ့ဗျာ။
• နှစ်ဆယ်ရာစုမကုန်ခင်ကတည်း မြန်မာပြည်က ထွက်ခွါလာ။
• အတောင်နှစ်ဆယ်ဝတ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဟာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတာ မြစ်ပေါင်း ၂ဝ မကပါ။
• ခုနေခါ ငယ်ပေါင်းတွေနဲ့ နေရာဟောင်းတွေကို ပြန်တွေ့ချင်တာ အဆ ၂ဝ အလွယ်ရှိမှာ။
ပိတောက်ပန်းဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဂုဏ်ယူစရာအမှန်ပါ။ ဘယ်လောက်မွှေးတယ်၊ ဘယ်လောက်လှတယ် သူများတွေကိုပြောပြရင် မခံစားတတ်ကြပါ။ ကိုယ်အချင်းချင်းသာ အလွမ်းသယ်ကြရပါတယ်။
စိန်ပန်းက တနှစ်လုံးလိုလို ပွင့်ပါတယ်။ အမွှေးနံ့က မရှိရှာတော့ လူသူတွေဂရုစိုက်တာ မခံရပါ။ ရာသီချိန်ရောက်တဲ့အခါ ပိတောက်ပင်တွေက ပွင့်လာကြတယ်။ လှလွန်း မွှေးလွန်းလို့ သူ့ခေါင်းမှာလည်း ပိတောက်ပန်း၊ ကိုယ့်ခေါင်းမှာလည်း ပိတောက်ပန်း။ လွမ်းလောက်ပါတယ်။ ဂုဏ်မောက်စရာ ကောင်းလှပါပေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆေးမန်းမှာ လွမ်းစရာရယ်လို့ ပြောစမှတ်သင်္ကေတ မရှိပါ။ ကျောင်းရှေ့တည့်တည့်မှာ စိန်ပန်းပင်သာရှိတယ်။ အရောင်ကလည်း အနီရောင်ရိုးရိုးပါ။ အပင်အောက် ရပ်စောင့်နေတိုင်း ခေါင်းပေါ်မှာ အရွက်ခြောက်တွေက ကျကျလာတော့ ဘယ်မှာလာ စိတ်ကူးယဉ်စရာဖြစ်မှာတုန်း။
သူ့ရဲ့တာရှည်ခံလှတဲ့သက်တမ်းကို ပိတောက်ပန်းကို ကမ်းချင်တယ်လို့ စိန်ပန်းခင်မြာ မုဒိတာပွါးနေရှာပါသတဲ့။ (တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ကဗျာတပုဒ်ကို မှီးပါတယ်။)
မြန်မာပြည်မှာ အလှတွေ တာရှည်ခံပါစေသတည်း။
မြန်မာစာအရေးအသား အလေးထားသူတယောက်က ပို့ပါတယ်။
၂၇-၈-၂ဝ၁၅ နေ့က ဆရာမောင်သာရကို လာကန်တော့ကြတဲ့ နာမည်ရ စာရေးဆရာတွေထဲက တဦးကနေ ရေးထားတဲ့ စာထဲမှာ -
၄ နာရီခြား တစ်ခါရှူရတယ်
၄ နာရီ တစ်ကြိမ် လေရှူရတဲ့
သူ့စာထဲမှာပဲ ဆရာမောင်သာရက သည်လိုပြောပါသတဲ့။
သတ်ပုံ သတ်ညွှန်း ငါ့မူနဲ့ငါပဲ။ ဦးနေဝင်းလုပ်သွားတဲ့ တစ်တွေ ငါမကြိုက်ဘူး။ ငါ့စာမူ ငါ့မူနဲ့ ငါပဲ။ ငါ့လက်ရေးအတိုင်း ငါ့အထားအသိုအတိုင်း မပြင်နဲ့ ငါမကြိုက်ဘူးလို့ ပါတယ်။
မောင်သာရရေးထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်က ညီအကို မသိတသိ။ ခုခေတ်စာရေးဆရာ ကိုသာရတို့ ကဗျာဆရာမ ခင်သာရတို့က ညီအစ်ကို မသိတစ်သိလို့ ရေးကြတယ်။
ညီအကိုမှန်း မောင်နှမမှန်း သားအဖမှန်း သိကြပါစေသတည်း။
ကျတော့်အသက် ၂၈ပါ။ ယောက်ျားလေးပါ။ အစာအိမ်ဖြစ်နေတာ ၃နှစ်ရှိပါပြီ။ အရက် ဘီယာ တခါတလေ သောက်တက်ပါတယ်။ သောက်ပြီးရင် အစာအိမ်အတွက်ဆေးပြန်သောက်ရပါတယ်။ သတင်းတခုမှာ အစာအိမ်မှာ ပိုးရှိနေရင် အချို ရှောင်ရမယ်ရေးထားပါတယ် အဲ့တာ enervon-c နဲ့ livolin forte သောက်နေတာ ရပ်ရမလား မသိလို့ပါဆရာ။ အမြဲလေးစားလျှက်ပါ ဆရာခင်ဗျာ။
အစာအိမ်မှာ ဘာဖြစ်နေ မသိပါ။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှသာ ရောဂါအမည်နဲ့ ဖြစ်တဲ့နေရာကို သိပါမယ်။ သတင်းတခုဆိုတာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမလဲ မသိပါ။ ကျွန်တော်သိတာနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။
အများစုဖြစ်တဲ့ လေနာ ခေါ် အစာအိမ်နာဖြစ်နေသူတွေ လူနေမှုပုံစံပါပြောင်းဘို့ လိုတယ်။ အပူအစပ် ရှောင်၊ ကော်ဖီ လျော့၊ ဆေးလိပ်-အရက် ဖြတ်ပါ။ စိတ်ဖိအားများတဲ့ အလုပ်ကနေ ပြောင်းလို့ရရင် ပြောင်းပါ။ တနေ့ နာရီဝက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ မယ်ဒီတေးရှင်းလုပ်တာ ကောင်းတယ်။ လေနာရောဂါရှိရင် စတုမဓူ၊ သကြား၊ ထန်းလျက်၊ ဆေး၊ စားတာဟာ ဥပုသ်စောင့်ပေမဲ့ သီလမပျက်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို ဖိအားနဲ့ထည့်ထားတဲ့ ဘီယာ၊ ဆိုဒါ၊ စပရင်း-ဝါးတား၊ ကိုကာကိုလာ၊ စပရိုက်၊ အင်နာဂျီ-ဒရင့်ခ်တွေက လေနာအတွက်မကောင်းပါ။ Sodium bicarbonate ဆော်ဒါမှုံ့သောက်ရင် ချက်ချင်းလို သက်သာပေမဲ့ ကြာရင် အစာအိမ်ပေါက်စေနိုင်တယ်။
ဘာဆေးမှမရှိတုန်း နာလာရင် ရေ တခွက်နှစ်ခွက် သောက်လိုက်ပါ။ နွားနို့ သောက်ပါ။ သွားလေရာ ဆေးယူသွားပါ။ ဆာရင်စားဘို့ စားစရာတခုခု ယူသွားပါ။ ကြော်တဲ့အစားတွေ ရှောင်ပါ။ အစေ့အဆံတွေ၊ တိုဖူး၊ ပဲပုတ်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပင်လယ်ထွက်အသီးအနှံတွေ၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တွေ တည့်ပါတယ်။ အသားကိုလျှော့ပါ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ဆီကလေနာနဲ့ မတည့်ပါ။ အစာကို နည်းနည်းချင်း ခဏခဏစားပါ။ စားနေကျ အစားအစာတွေသာစားတာ ကောင်းတယ်။ အစာလမ်းက သူချက်လုပ်ပေးနေကြဟာကို ပိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ အီတာလျန်-ပီဇာ၊ ဘာဂါ-ယန်းကီး၊ ဆူရှီး-ဂျပန်၊ ကုလားမှန်-ရိုတီး၊ ထမင်းချည်းစားတာ ဗမာ၊ တရုပ်ဟာ ခေါက်ဆွဲ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စားနေကြပဲ ကောင်းတယ်။
အရပ်သုံးဆေးနည်းမှာ ပင်စိမ်းရွက်ကို စားခိုင်းတယ်။ ဂျင်း (ချင်း) စိမ်းသည် လေနာ၊ ဝမ်းဗိုက်-ရင်ခေါင်းနာ တို့ကိုနိုင်၏လို့ ဆိုတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးတခုက ဗီတာမင်စီဟာ လေနာနဲ့မတည့်ဘူးရေးတာ ဖတ်ရတယ်။ မဟုတ်ပါ။ ဗီတာမင်စီ 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ရင်၊ သွေးယိုတာအတွက်အကျိုးရှိတယ်။ ချယ်ရီသီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီးလိုဘဲ ခရမ်းချဉ်သီးကလည်း အဆိပ်အတောက် ပြေစေပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးက လေနာမသင့်လို့ ပြောတာလည်း ဖတ်ရတယ်။
4. Duodenitis အစာအိမ်အထွက် အူသိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/duodenitis.html
5. Gastric cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
6. Gastric Juice အစာခြေအရည် http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/gastric-juice.html
7. Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/gastritis.html
8. GERD (1) အချဉ်ရည် အထက်ဆန်ခြင်း (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
9. GI Tract အစာလမ်းစစ်ဆေးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/gi-tract.html
10. Heartburn ရင်ပူခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
11. Hour Glass Stomach သဲနာရီအစာအိမ်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/hour-glass-stomach.html
12. Medicine for Diseases of Digestive Tract အစာလမ်း လေနာရောဂါဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/gastric-cancer.html
13. Omeprazole အိုမီပရာဇိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/omeprazole.html
14. Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer-diagnosis_25.html
15. Peptic ulcer လေနာဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်းဖြစ်သည် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html
16. Stomach cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stomach-cancer.html
ကောက်ညှင်းဆန်မှုန့်၊ ထန်းလျက်နဲ့ အုန်းသီးဆံတွေက ထိုင်းကနေလာပုံရတယ်။ မြေပဲဆံကတော့ အိန္ဒိယလို့မှတ်တယ်။ ငှက်ပျောဖက်ကတော့ ကျူးဘားကနေလာသလား မပြောတတ်။
မုံ့ဖက်ထုပ်ကို လုပ်ပို့သူက ရခိုင်။ စားတဲ့သူကိုယ်တိုင်က အညာသား။ ကမ္ဘာကြီး ပြားသလားတော့ မသိ။ မုံ့ဖက်ထုပ်ဆိုတာ ဘယ်မှာနေနေ စားလို့ရနေတယ်။
အမျိုးသမီးများ ခါးတုတ်ရင် နှလုံးရောဂါရလမ်း ပိုစေနိုင်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နာရီက သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ခါးနဲ့ တင်ပါးအတိုင်းအတာ အချိုးအစားကိုကြည့်ပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်သူတွေကို လေ့လာတာဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေထက် ပိုနေတာ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းမှာ ခါးတုတ်သူတွေကို ပန်းသီးပုံလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Waist-to-hip ratio ခါး-တင် အချိုးအစားဟာ ဝတယ်လို့ပြောလေ့ရှိတဲ့ Body mass index (BMI) ကိုယ်ထုထည်ထက် ပိုပြီးပြောလို့ရတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ၆% က နှလုံးရောဂါရကြပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ ၁၈% ရတယ်။ ဆောရီး။ BMI များရင် ကျားရော မ ပါ နှလုံးရောဂါရလမ်းပိုတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကို ယူကေနိုင်ငံမှာ အသက် ၄ဝ ကနေ ၆၉ နှစ်ရှိသူ လူပေါင်း ၅ သိန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
Heart attack symptoms နှလုံးရောဂါလကဏာတွေကတော့
1. Chest pain ရင်ပတ်နာခြင်း၊ နာတာက ကိုယ်တခြမ်းနဲ့ လက်အထိနာခြင်း၊
2. Feeling lightheaded or dizzy ခေါင်းထဲပေါ့နေပြီး မူးခြင်း၊
3. Sweating ချွေးပြန်ခြင်း၊
4. Shortness of breath အသက်ရှူမဝခြင်း၊
5. Feeling or being sick နေမကောင်းတာကိုခံစားရခြင်း၊
6. Overwhelming sense of anxiety စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်း၊
7. Coughing or wheezing ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ စီစီစီစီအသက်ရှူသံ ကြားရခြင်းတွေဖြစ်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပက နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်အတွင်း အစိုးရသစ်ရဲ့ မူဝါဒတွေကို အဓိက အလေးပေးပြောကြားသွားခဲ့သလို၊ သံတမန်တွေအနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Burma နဲ့ Myanmar အဆင်ပြေတာကိုခေါ်ဖို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
(စ) တလက်စတည်း ဒီမှာပဲ Burma နဲ့ Myanmar ကိစ္စကိုလည်း ကျမအနေနဲ့ ရှင်းသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သံတမန်တွေထဲမှာ ဘယ်ဟာကို ခေါ်ရမှန်းမသိတဲ့သူတချို့လည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဆင်ပြေတာကိုခေါ်ကြပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ ဘယ်ဟာကို သုံးရမယ်ဆိုပြီး ပြောထားတာမရှိပါဘူး။ ကျမက Burma ကိုသုံးနေကြဆိုတော့ Burma ကို ဆိုတာကိုမကြာခဏသုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ဒီလိုခေါ်လို့ တခြားလူတွေလည်း လိုက်ခေါ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်တို့အားလုံး အဆင်ပြေသွားအောင် ကျမလည်း နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာလို့ ကြိုးစားပြီးခေါ်ပါမယ်။ (ဆုံး)
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်လောက်ကစာ ပြန်တင်ပါရစေ။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသုံးသူတိုင်းကနေ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို Burma နဲ့ လူမျိုးကို Burmese လို့ ပေါင်းခဲ့ကြတာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမဖြစ်ခင်ကတည်းကပါ။ ၁၉၈၉ မှာတော့ နာမည်ပြောင်း ကင်ပွန်းတပ်တယ်။ နိုင်ငံတော် အသက် (၄ဝ) ကျော်ပါပြီ။ မျက်နှာလုပ်နိုင်ငံတွေနဲ့လူတွေက အရင်ဆုံးပြောင်းခေါ်ကြတယ်။ ခုထိမခေါ်သေးတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ခေါ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှန်း မသိသူကများတယ်။ ကျွန်တော် မြန်မာဘာသာပြန်ဆရာ လုပ်နေတဲ့ကျောင်းက ကွန်ပြူတာစနစ်ထဲမှာ နှစ်ခုလုံးရေးမှသာ အမှန်ပေါ်တယ်။
အိန္ဒိယအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေက တိုင်းပြည်ကို Myanmar လို့ ပေါင်းပြီး၊ လူမျိုးကို Myanmerese လို့ပေါင်းပါတယ်။ တရုတ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာက ဦးသိန်းစိန်ကို Wu Dengsheng လို့ရေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဆီကနေ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယတွေရော တရုပ်တွေပါ သူ့တို့အကြိုက်သူတို့ရေးတာ ပြောစရာမရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်ဆီကနေပဲ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့တတွေက သူတို့ထက် သာသင့်တယ်ထင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအစစ်ကိုသာ ယူသင့်ကြပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့ ဘယ်သူကမှ Myanmar ကို မြန်မာလို့ မထွက်တတ်ပါ။ My နဲ့ စပေါင်းတော့ (မိုင်-အင်န်-မာ) လို့သာ ထွက်ကြတယ်။ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေက (မိုင်-အင်န်-မားရ်) လို့ထွက်တယ်။ (ဦးနိုး) ကို U Noe လို့ပေါင်းထားတော့ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တခုမှာ မစ္စတာ (ယူ-နိုး-အီး) လို့ အော်တာကို ကိုယ့်ခေါ်နေမှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုပြောချင် ရေးချင် သင်ယူချင်သူတွေကို အကြံပေးပါရစေ။ အိန္ဒိယ-အင်္ဂလိပ်လဲ မယူနဲ့၊ တရုတ်-အင်္ဂလိပ်လဲ မယူနဲ့။ လက်ရှိ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်လဲ မသင့်ပါ။ ပြောမရလည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာတော့ သုံးချင်သူများသုံးကြပေါ့။ အဲ့့ အပြင်ထွက်ရင်တော့ အဆင်မပြေဖြစ်ကြမယ်။ အစစ်ကိုသာ ယူချင်သူတွေက ယူပေါ့။ အတုယူချင်သူတွေကလဲ ယူကြပေါ့။ တချို့က ညံ့မှကြိုက်တယ်လို့တော့ မငေါ့ချင်ပါ။ ကွယ်ရာမှာ ရီတာခံရမယ်။
နိုးလဲ မကောင်း၊ (ကန်တော့ပါ) အီးလဲ မကောင်းပါ။ ကမ္ဘာမှာ လေဆိပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ ဝါးလုံးခေါင်းထဲသာ နေကြရတာမဟုတ်တော့ပါ။
ကျမအသက် ၃ဝ ပါရှင့်။ မြန်မာမှာနေပါတယ်။ ဖတ်ရတာ အောင့်သက်သက်နေတယ်။ ပြည်ပမှာနေသူတတွေက မြန်မာပြန်တုန်းကလို့ပြောတိုင်း အော့့် သူက ဘာသာပြန် လုပ်တာကိုးလို့ ထင်မိတယ်။ မြန်မာဆိုတာ သဒ္ဒါအရ ဘာလဲ။ နာမ်စား၊ နာမဝိသေသနလား။ တိုင်းပြည်လား၊ လူမျိုးလား။
မြန်မာ = n. ဗမာ၊
1. The people of Myanmar.
2. (a) Same as ဗမာ n; Bamar n; (b) “no longer current” Burmese; Burman.
မြန်မာနိုင်ငံ / n. Myanmar
အဘိဓာန်ရဲ့ဆိုလိုချက်က မြန်မာဆိုတာ နာမ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ အားနည်းချက်ရှိနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံလို့ ရေးမှ ပြောမှသာ သဘောပေါက်ပါမယ်။ နာမဝိသေသနအသုံး နာမ်သာဖြစ်ပါမယ်။
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် မမှားပါ။ မပြည့်စုံလို့သာထင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မှန်ဆိုတာကိုယ်၌က ဝိဝါဒကွဲစေလို့ အခုလို သူမှန်-ကိုယ်မမှား အငြင်းပွါးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
(က) Noun နာမ်
1. The language of England အင်္ဂလန်ဘာသာစကား
2. The people of England အင်္ဂလန်လူမျိုး
(ခ) Adjective နာမဝိသေသန
Relating to England, its people, or their language အင်္ဂလန်နှင့်ဆိုင်သော၊ ၎င်းလူမျိုးနှင့်ဆိုင်သော၊ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားနှင့်ဆိုင်သော။
အဲတာကြောင့် ဖြစ်သင့်တာက -
မြန်မာနှင့်ဆိုင်သော၊ ၎င်းလူမျိုးနှင့်ဆိုင်သော၊ သို့မဟုတ် ၎င်းဘာသာစကားနှင့်ဆိုင်သော။
စကားလုံးဥပမာ = မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်၊ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာအစားအစာဖြစ်ရပါမယ်။
ဝါကျဥပမာ = ကျွန်တော်သည် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာနေထိုင်ရပါသည်။
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် မပြည့်စုံသလို အဓိပ္ပါယ်မှန်အတိုင်း မသုံးကြပါ။ အဓိပ္ပါယ်မှန်ကိုယ်၌က ဝိဝါဒကွဲစေလို့ အခုလို သူမှန်-ကိုယ်မမှား အငြင်းပွါးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ထွင်လိုက်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်က လူမျိုး၊ နိုင်ငံနဲ့ ဘာသာစကား အားလုံးကို Myanmar လို့သာလုပ်ထားတော့ မိခင်ဘာသာအင်္ဂလိပ်စာသုံးသူတွေအတွက် ဇဝေဇဝါဖြစ်စေတယ်။
• Myanmar - ဘာလဲ။
နိုင်ငံအမည်ပေါင်း ၂ဝ၅ ခုထဲမှာ r + ရှေ့က Vowel တလုံးနဲ့အဆုံးသတ်တာ Myanmar ကလွဲရင် East Timor နိုင်ငံသာ ရှိတယ်။ အဲတာကို Timor-Leste လို့ ပြောင်းလိုက်ပြီ။ Timor လို့ခေါ်စဉ်က အဲဒီကလူမျိုးတွေကို အင်္ဂလိပ်လို Timorese လို့ ရေးပါတယ်။ အဲတာကြောင့် အိန္ဒိယထုတ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေက Myanmar – Myanmerese လို့ရေးကြတယ်။ သူတို့ကို မှားတယ်လို့ သွားပြောဘို့ မသင့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာရေးထုံးနဲ့ ညီတယ်။
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အရတော့ Myanmar ဆိုတာ လူမျိုးသာဖြစ်နေတယ်။ အဲတာကို အစိုးရပိုင်မီဒီယာတွေ ကိုယ်တိုင်က တိုင်းပြည်လို့ အစိုးရထုတ်ထားတဲ့ အဘိဓာန်မှာဆိုထားတာကို ဆန့်ကျင်ပြီးသုံးနေတာဖြစ်တယ်။ အပြင်ထွက်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို မိန့်ခွန်းပြောနေသူတွေလည်း Myanmar ဆိုတာ လူမျိုးလား၊ တိုင်းပြည်လား၊ စကားလား သတိထားပုံမရကြပါ။ ဆောရီး။ ကျွန်တော်တော့ နားကလောတာအမှန်။
I amaMyanmar, I speak Myanmar and I live in Myanmar. လို့ပြောနေကြတယ်။
I am English, I speak English and I live in English country (England). လို့သာရေးရတယ်။ I live in English လို့ မရေးရပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာစာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်သိတဲ့ပညာရှင်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ကုလားထိုင်နေရာရတိုင်း တချို့က တကယ်တတ်တာ မဟုတ်ကြတာကို သိလာရတယ်။ ကန်တော့ပါ။ ပညာအရောင် ပြန်လည်ထွန်းပြောင်ပါစေသတည်း။
၁။ ဆရာ ရေကန်မှာ ပိုးလောက်လန်းတွေ ပေါက်နေလို့ မပေါက်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆရာ။ လူကိုအန္တရာယ်မဖြစ်တဲ့ ဆေးတွေ ဘာတွေ ပိုးလောက်လန်းမပေါက်အောင် ကန်ထဲထည့်ထားလို့ရတာ ရှိလားဆရာ။
၂။ ဆရာခင်ဗျား ခုလိုမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာ ၇ လသားအရွယ်ကလေး ခြင်မကိုက်အောင် ဘာဆေးလိမ်းရမလဲခင်ဗျာ။ ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတွေရဲ့လက္ခဏာလေးတွေပါပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ ဘယ်လိုလက္ခဏာဖြစ်လာရင် ဘာတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာပါ။ ကလေးထိန်းနဲ့ထားရလို့ စိတ်မချလို့ပါဆရာ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
တမြန်နှစ်နွေရာသီတုန်းက ခြင်နှိမ်နင်းရေးနဲ့ ဗီတာမင်ဘီ-ဝမ်းစာတင်တော့ ပွက်လောညံသွားခဲ့တယ်။ မှန်တယ် ပြောသူရော ရစရာမရှိအောင်ရှုံ့ချသူပါ များလွန်းတာ၊ ခြင်ပေါသလိုပဲ။ ခြင်နှိမ်နင်းရေး ရေးတဲ့သူကို ခြင်ပိုက်ကိုက်တယ်။
ကမ္ဘာမှာ ခြင်အမျိုးအစားပေါင်း (၃ဝဝဝ) ရှိတယ်။ လူပေါင်း (၂) သန်းလောက်ဟာ ခြင်ကနေကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကို ခံစားကြရတယ်။ ခြင်ကိုက်ခံရရင် ငှက်ဖျား၊ ဂျပန် ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ အဝါရောင် အဖျားရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ နိုင်းမြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းရောဂါတွေကို ကူးစက်စေနိုင်တယ်။ ခြင်ထီးတွေက လူ့သွေးမစုပ်ပါ။ ခြင်မတွေကတော့ ဥအတွက်သွေးလိုလို့ သွေးစုပ်ရတယ်။
ခြင်လိမ်းဆေးတွေထဲမှာ DEET ပါတယ်။ 40% DEET ခြင်လိမ်းဆေးက ၇ နာရီကြာခံတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မှတ်ဉာဏ်မေ့၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကြွက်သားအားနည်း၊ အဆစ်နာ၊ လက်တုန်၊ တက်၊ အာရုံကြောအဆိပ်သင့်၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်၊ အရေပြားအနေရခက်၊ အင်ပြင်ထွက်၊ ပျို့-အန်၊ သွေးဖိအားကျ၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ အသက်ရှူမဝ၊ မျက်ရည်ကျတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ 1-methylpiperzine ဒြပ်ပေါင်းပါတဲ့ ခြင်ဖြန်းဆေးလည်း သုံးရတယ်။ ကြာကြာမခံပဲ အငွေ့ပျံတယ်။ ခြင်ဆေးထဲမှာပါတဲ့ Permethrin ဓါတ်ကနေလည်း ဆိုးကျိုးတွေရစေနိုင်တယ်။ အဆုပ်၊ အသည်းကင်ဆာ ကိုလည်း သံသယရှိတယ်။ ကလေးတွေအမူအယာပြောင်းတာလည်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အာရုံကြောမကောင်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ပျားကောင်တွေနဲ့ ကြောင်တွေကိုလည်း အဆိပ်သင့်စေနိုင်သေးတယ်။
သဘာဝနည်းတွေလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ခြင်မရှိရာမှာသာနေထိုင်ပါ။ နေ့ခင်းမှာသက်သာတယ်။ ရေသေရှိရာမှာသာ ခြင်ပေါတယ်။ ခြင်က ရေရှိမှသာအသက်ရှင်ပြီး မျိုးပွါးနိုင်တယ်။ ရေကျန်နေနိုင်တဲ့ ပန်းအိုး၊ တာယာဟောင်း၊ အိုးခွက်၊ ရေမြောင်း၊ ရေတံလျှောက်၊ ရေလှောင်ကန်၊ အမှိုက်ပုံ၊ ငှက်သိုက်စတာတွေမှာ ရေကျန်မနေစေအောင် ရှင်းလင်းပါ။ အရောင်ဖျော့တဲ့ အဝတ်ဝတ်ပါ။ ခြေလက်ရှည်ဝတ်ပါ။ ဦးထုပ်၊ ခြေအိတ်ဝတ်ပါ။ ပန်ကာဖွင့်ထားပါ။ သစ်ကြံပိုးရွက်ဆီ၊ ဗနီဂါအကြည်ဆီနဲ့ သံလွင်ဆီရောထားတာကလည်း ခြင်ကိုနိုင်တယ်။ လိမ်မော်ယူကလစ် ၃၂% ဟာ ၃ နာရီကြာ ၉၅% မက အကာကွယ်ပေးတယ်။ လင်းနို့နဲ့ ပုစဉ်းရှိရင် ခြင်မနေနိုင်ပါ။ ထပ်တရာပန်းပင်စိုက်ထားပါ။
ခြင်အများစုက ရေသေမှာမျိုးပွါးကြတယ်။ အဲလိုရေတွေမထားရ၊ ရှင်းလင်းရမယ်။ (OWMM) နည်းနဲ့ (RIM) နည်းတွေ ရှိတယ်။ ဇီဝထိန်းချုပ်မှုမှာ ခြင်ကိုနိုင်တဲ့ ပါရာဆိုက်၊ ပိုးမွှားနဲ့ ခြင်းစားတဲ့အကောင်တွေ သုံးရတယ်။ Gambusia affinis ခြင်စားငါး၊ cyprinids နဲ့ killifish ငါးတွေမွေးရတယ်။ တီလားပီယားငါးလည်း ခြင်လောက်လန်းကိုစားတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးတွေ အများအပြားမွေးပြန်ရင် ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်စေတယ်။ Bacillus thuringiensis ဗက်တီးရီးယား၊ Metarhizium anisopliae နဲ့ Beauveria bassiana အကောင်တွေကိုလည်းသုံးတယ်။ သဘာဝဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ (IPM) နည်း သုံးနိုင်တယ်။
Vitamin B1 ဗီတာမင်ဘီ-ဝမ်းကို ဆန်းစစ်မှုရလဒ်တွေက မတူကြပါ။ ၂ဝဝ၅ ထုတ် အမေရိကန်ခြင်နှိမ်နင်းရေး ဂျာနယ်မှာ ရေးထာတာရှိတယ်။ ဗီတာမင်ဘီ သောက်ထားသူအုပ်စု၊ ဗီတာမင်စီ သောက်ထားသူအုပ်စုနဲ့ ဘာဆေးမှ မသောက်သူအုပ်စု (၃) စုကို လေ့လာတယ်။ မထူးခြားဘူးလို့ ကောက်ချက်ချပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်မှာ ဗီတာမင်ဘီကို ဖြန်းဆေးလုပ်ပြီး စမ်းခဲ့တယ်။ မထူးဘူးလို့ကောက်ချက်ချတယ်။ ၁၉၆ဝ ကျော်လာက်က သုတေသနတွေအရ ဗီတာမင်ဘီ-ဝမ်းကို နေ့စဉ်နည်းနည်းသောက်တာ ခြင်ကိုက်မခံရ (သက်သာတယ်) လို့သိရပါတယ်။
လူ့အရေပြားအနံ့ကနေ ခြင်ပြေးအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးနံ့ကို လူကမရပေမယ့် ခြင်ကအတော်မကြိုက်ပါလို့ပါ။ ဘီ-ဝမ်းဆေးပြားကို တနေ့မှာ 25 ကနေ 50mg အထိ ၂ ပါတ်ကြာသောက်ထားရင် ခြင်မကိုက်စေပါလို့ရေးတာရှိပါတယ်။ (တဆေး) ခေါ် ကစော်ဖေါက်ရာမှာသုံးတဲ့ Yeast ဆေးပြားမှာ ဗီတာမင်ဘီဝမ်းပါတာများလို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Vitamin B1 100mg နေ့စဉ် သောက်နည်းအဖြစ်လည်းသုံးတယ်။ ခြင်ပေါတဲ့ဒေသမသွားခင် ၂ ပါတ် သောက်သင့်တယ်။
လူတွေ ခြင်ကိုက်ခံနိုင်တာ မတူကြတာက ကိုယ်နံ့မတူလို့ပါ။ ဘီ-ဝမ်း သောက်တာလည်း အနံ့ကို ပြောင်းစေတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဘီ-ဝမ်းဖျော်ထားတာကလည်း လေနံ့ပြောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေသန့်ကိုဗူးခွံထဲကို ရေ ၁ဝဝ စီစီနဲ့ ဗီတာမင်ဘီဝမ်း ၁ဝ ပြားရောထည့်ပြီး ပျော်ဝင်သွားအောင်လှုပ်ခါပေးပါ။ ဗီတာမင်ဘီဝမ်းအနံ့ဟာ ခြင်တွေမနှစ်သက်လို့ ခြင်လာမကပ်တော့ပါ။ ဆေးရည်ဟာ အနည်းဆုံး ၇ နာရီလောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ခြင်နှိမ်နင်းရေးစာဟာ ဆေးရောင်းချင်လို့ရေးတာမဟုတ်ပါ။ ရမ်းကုနည်းလည်းမဟုတ်ပါ။ အာမခံချက်နဲ့ ရေးတာလည်း မဟုတ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
1. Common infections during rainy season မိုးရာသီတွင် ဘာဆင်ခြင်ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/common-infections-during-rainy-season.html
2. Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) သွေးလွန်တုပ်ကွေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/dengue-haemorrhagic-fever-dhf.html
3. Mosquito control summary ခြင်နှိမ်နင်းရေးအချုပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/mosquito-control-summary.html
4. Mosquito control ခြင်နှိမ်နင်းရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/mosquito-control.html
5. Mosquito fogging ခြင်ဆေးမှုတ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/mosquito-fogging.html
6. Mosquito question ခြင်နှိမ်နင်းရေးမေးခွန်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/mosquito-question.html
7. Mosquito-Borne Diseases ခြင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/mosquito-borne-diseases.html
8. Mosquitoes ခြင်မတွေ သတိထား http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/mosquitoes.html
9. Mosquitoes ခြင်မတွေ သတိထား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/mosquitoes.html
တိုင်းပြည်နာမည်ကို Myanmar လို့ပြောင်းပြီးကတည်းက တိုင်းတပါးသားတွေကို I am Myanmar, I speak Myanmar and I live in Myanmar မြန်မာမိုးမွှန်အောင်ပြောနေကြတယ်။ နားထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ။
I am English, I speak English and I live in English country (England) လို့သာပြောရပါတယ်။
I sawasaw inasaw ကိုအမှတ်ရစေတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ I sawasaw onasaw လို့ပြောကြတယ်။ လွှစင်ပေါ်မှာ လွှတချောင်းကို မြင်ခဲ့သည်လို့ပြောချင်ပုံရတယ်။ လွှစင်လို့ အဓိပ္ပါယ်မရပါ။ နားထောင်တဲ့သူကို ဆွဲဆောင်ချင်လို့ တမင်ပြောတဲ့ဝါကျသာဖြစ်ပါတယ်။ မမှန်ပါ။ မှန်တယ်ဆိုအုန်းတော့ မခန့်ပါ။
I sawasaw inasaw ဆိုတာက နာမည်ကြီးတဲ့သူမှာလည်း ပြဿနာတွေ ရှိတယ်တဲ့။
I sawasaw sawingasaw နဲ့ I sawacut inasaw လို့လည်း ပြောကြတာရှိတယ်။
I sawasaw which could not saw ပုံထဲကစာ ဆိုလိုတာက ဖြတ်လို့မရတဲ့လွှကို မြင်ခဲ့သည်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ လွှတိုက်လို့ လွှဆွဲလို့မရတဲ့ လွှတွေက များတယ်။ ဆောရီး။
၁၉၇၅ စက်တင်္ဘာလထုတ် တေဇရုပ်စုံမှ
ကျွန်တော် မြန်မာဘာသာပြန်ဆရာလုပ်နေတဲ့ကျောင်းမှာ မြန်မာစကားပြောကျောင်းသား၊ စပိန်စကားပြောကျောင်းသားနဲ့ အာရတ်စကားပြောကျောင်းသားတွေ တက်နေကြတယ်။ အထက်တန်းအဆင့်သာဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ်စာကို သဒ္ဒါ၊ အဖတ်၊ နားထောင်တာနဲ့ အရေးအသား သင်ပါတယ်။
သင် အမေရိကားကိုရောက်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ မေးခွန်းကိုဖြေကြတဲ့အခါ၊ အမေရိကန် နဲ့ အမေရိကား မှားနေရင် ပြင်ပေးရတယ်။
ကျနော် တရုပ်အစားအစာကို ကြိုက်သည်လို့ ဖြေကြတဲ့အခါ ချိုင်းနီးစ် နဲ့ ချိုင်းနားကို ပြင်ပေးရတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်၊ မြန်မာပြည်ကလာသည်၊ မြန်မာ့အစားအစာကိုကြိုက်သည်၊ မြန်မာစကားပြောသည်ကို ဖြေကြရင်တော့ တိုင်းပြည်ရော လူမျိုးရော၊ နာမ်ရော နာမဝိသေသနပါ မြန်မာချည်းသာဖြစ်နေလို့ တခြားတိုင်းပြည်တွေက ကျောင်းသားတွေက အံ့သြနေကြတယ်။ ကျွန်တော်က ပြင်မပေးရဲပါ။
ဆရာရှင့် အသက် ၂၈ ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ အရင်ကနာတာရှည်အူမကြီးရောင်တာဖြစ်ဖူးပါတယ်။ အခု ဝမ်းခဏခဏ ကိုက်လို့ အစာအိမ်မှန်ပြောင်းထပ်ကြည့်တာလဲ chronic antral gastritic stomach (bacteria density score 2) ပါတဲ့ဆရာ။ ဝမ်းစစ်တော့လဲ faecal calprotectin 2295 ပါတဲ့။ အခုပိုးသတ်ဆေးသောက်နေပါတယ်။ အခုဝမ်းသွားရင် စမြင်းခံတာ ၂ ရက်ရှိပါပြီ။ စအိုဝတခုလုံးလဲ ရောင်ပြီးနာနေပါတယ်။ ဘာလို့ပါလဲ။
စမ်သပ်ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေက အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးကြပါမယ်။ ရော၈ာသိလိုရင် ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။
1. Anorectal diseases စအို-အစာဟောင်းအိမ် ရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/anorectal-diseases.html
2. Antral Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/antral-gastritis.html
3. Blood in Stool စအိုက သွေးယိုခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blood-in-stool.html
4. Colorectal cancer အူမကြီး ကင်ဆာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/colorectal-cancer.html
5. Crohn’s Disease ခရုန်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/ulcerative-colitis.html
6. Dysentery ဝမ်းကိုက်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/dysentery.html
9. Proctitis စအို ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/proctitis.html
10. Sigmoiditis အူမကြီးတနေရာရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/sigmoiditis.html
11. Ulcerative colitis အူမကြီးရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/ulcerative-colitis.html
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ကျမက ဆရာရေးတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစာတွေကို လေ့လာဖူးပါတယ်။ ခုက ကျမရဲ့အမျိုးသားအတွက် ဆရာ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်လေးလိုချင်လို့ပါ။ အမျိုးသားက အသက် ၃၃ပါ။ stress တွေ သိပ်များပါတယ်။ အလုပ်တွေနဲ့လဲမနားရပါဘူး။ သူ့အတွက် ဘာအားဆေးက သင့်တော်မလဲဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာရှင့်။
၂။ ကျနော်က ဆရာတယောက်ပါ။ ဒီကနေည ၇နာရီလောက်ကမှ တပည့်မလေးတယောက်က ကြောက်တယ် ကြောက်တယ်၊ ငါ့ကိုသူတို့ စာကျတ်လို့ မရအောင် လုပ်နေကြတာဆို ရုတ်တရက်ထငိုပါတယ်။ သူ့မှာ အသိစိတ် ပျောက်မနေပါဘူး။ ဆရာဆရာမတွေကို သူသိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတင်းရုန်း ငိုနေတော့ သူရဲပူးတယ်ဆိုပြီး တခြားကလေးတွေလည်း ကြောက်နေပါတယ်ဆရာ။ ဒါမျိုးဖြစ်ရပ်ကို ဆေးပညာလောကမှာ ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။ ဘာအကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါသလဲ။ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း လူနာအပေါ် ဘယ်လို ပြုစုစောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာလေးပါ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ မနက်ဖြန် ကျောင်းတွင်း ၁ဝဝ ဖိုးမေးခွန်း စာမေးပွဲဖြေမှာပါ။
1. Alprazolam စိတ်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/alprazolam.html?q=stress
3. Stress Affect Your Appearance စိတ်ရုပ် ဖိအားနှင့် အသွင်အပြင် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/04/stress-affect-your-appearance.html?q=stress
4. Stress and Infertility စိတ်ဖိအားများတာနဲ့ သားသမီးမရနိုင်တာ ဆက်စပ်မှုရှိ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/stress-and-infertility.html?q=stress
ခပ်တိုတိုသာရေးပါရစေ။ လူတွေရဲ့စိတ်ဖိအားနဲ့ ရုပ်ဖိအားတွေကနေ အသွင်အပြင်ကိုဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲကို အလှအပ အထူးပြုလေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ထားတာကတော့
• Anxiety Disorders စိုးရိမ်စိတ်ကဲလွန်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/anxiety-disorders.html
• Mass Hysteria အစုလိုက်အရူးထခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/mass-hysteria.html
• Stress changes brains of boys and girls differently https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/stress-changes-brains-of-boys-and-girls.html
• Stress and Infertility စိတ်ဖိအားများတာနဲ့ သားသမီးမရနိုင်တာ ဆက်စပ်မှုရှိ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/stress-and-infertility.html?q=stress
• Stress Affect Your Appearance စိတ်ရုပ် ဖိအားနှင့် အသွင်အပြင် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/04/stress-affect-your-appearance.html?q=stress
မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ကျမအမအတွက်မေးပါရစေ။ အသက်က ၃၇ပါ။ ခင်ပွန်းရှိ။ ကလေး၃ယောက်မိခင်ပါ။ သူက ငယ်ကနေခုထိ အာသီးယောင်တယ်။ လည်ပင်းအစေ့တပ်ဆိုပြီး နွေရာသီရောက်တိုင်းဖြစ်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ အနှစ် ၃၀ လောက် ကြာနေပါပြီ ဆေးထိုးလိုက်သက်သာလိုက်နဲ့ပါ ခုတော့ သွေးစက်တာ လေးဖက်နာလို့ပြောပါတယ်။ လေးဖက်နာပိုး ၁၆၀ ကျော်ရှိတယ်ပြောပါတယ်။ ပင်နီစင်လင် ၃လ သောက်ခိုင်းတယ်ပြောတယ်ဆရာ။ ခုသူ့သမီးအကြီးလည်း နေမကောင်းဖြစ်ပြီး အာသီးယောင်နေတယ်။ ဆေးခန်းပြပြီး သွေးစက်ရပြန်တယ် အသက်က ၁၅ နှစ်ပါ ဒီလိုတခါမှ မဖြစ်ဖူးပါဘူး သွေးစက်ဖြေက လေးဖက်နာ လို့ပြောပါတယ်တဲ့။ သူမေထက် လေဖက်နာပိုးများတယ် ပြောပါတယ်တဲ့။ ပင်နီစင်လင် တနှစ်သောက်ခိုင်းပါတယ် အဲဒါ ဆေးသောက်ရမှာကြောက်ပြီး သေချာ ရောဂါအကြောင်း နားမလည်လို့ ကျမဆီ့ ဆရာကိုကူညီမေးပေးပါဆိုလို့ ဆရာဖြေပေးပါရှင်။ အမှားပါရင် ပြင်ပေး ဖြေကြားပေးပါ ရိုသေစွာမေးလိုက်ပါတယ် ဆရာသက်ရှည်ကျမ္မာပါစေ။
Rhumatic links လေးဘက်နာစာများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/rhumatic-links.html
ASO ဆိုတာ ပိုးမဟုတ်ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/aso.html
သွေးစက်လို့ တကြိမ်မကရေးလို့ စာရိုက်မှားတာတော့ မဟုတ်။ သတ်ပုံမှားသိနေတာဖြစ်တယ်။ သွေးစစ်လို့ ရေးရတယ်။
ဆရာခင်ဗျား ကွန်ဒွန်သုံးမဆောင်ဘဲ့့
မေးခွန်းကို အစအဆုံး မထည့်တော့ပါ။
မြန်မာလို စာရေးကြတာ စကားပြောဆိုကြတာတွေ အတော်ကို လွဲမှားနေကြကြောင်း မေးခွန်းတွေနဲ့ ဖေ့စ့်ဘွတ်မှာ ရေးတာတွေဖတ်ပြီး သိရတယ်။ အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
သုံးဆောင်ဆိုတာ စားသောက်တာမှာသာ သုံးရတယ်။ ကွန်ဒွမ် (ကန်တော့ပါ) ကိုပြောရင် သုံးစွဲတာလို့ ရေးရတယ်။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အထက်တန်းနဲ့ ဆေးကျောင်းသားခေတ်မှာသာမက ကနေ့အထိတိုင် ထင်ရှားပြီး စာဖတ်သူတွေကို အလွန်စွဲလမ်းစေပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ပြန်ထုတ်ကြတယ်။ သတ်ပုံတွေကို ပြင်ထားကြတယ်။ စာအုပ်အဖုံးမှာ တစ်မဟုတ်ဘဲ ကြော်ငြာသူတွေက တစ်လုပ်ထားကြတယ်။ တပြည်သူ မရွှေထားကို တစ်ပြည်သူမရွှေထားလုပ်ထားကြတယ်။ လျှော်ကန်ပါရဲ့လာ့း့
ကျွန်တော့်ဆီမှာ မူရင်းစာအုပ်တချို့ရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရေးခဲ့တဲ့ သတ်ပုံနမူနာနည်းနည်းလောက်ကို တင်ပြပါတယ်။
ဟိုတခါတုန်းကကဲ့သို့ပင် ငွေလရောင်မှ ရွက်ကြွေတောများကို ညိုလတ် မြင်သည်။ ဟိုတခါတုန်းကကဲ့သို့ပင် ညိုလတ်သည် ညင်သာစွာ စတင်သီဆိုသည်။
ငွေလာသာသော နွေညပြာပြာဆီ၊ မြူလွှာမှုန်ရီ၊ သရဖီသင်း နှင်းကလဲ့စီ၊ ဝါရွက်တို့ ကြွေပြလေပြီ၊ သည်းသည်းရုတ်ရုတ်၊ တဖြုတ်ဖြုတ်တချီ၊ နွဲ့ယဲ့ယဲ့ ဝဲကာတလီ့့
စွန့်ခွာရသည့် နွေညများ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/02/blog-post_96.html
အထက်တန်းတွဲ့၏ က ခုံတန်းစဉ်ဘက် တနေရာရသည်မှာ ကံကောင်းသည်။ သည်ခုံတန်းစဉ်မှာက ယှဉ်ဘက်မရှိ။ တခုံတည်းတွင် တဦးတည်း သီးသီးသန့်သန့် ထိုင်ရသည်။
ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ဝယ် (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2018/02/blog-post_88.html
နှင်းမြူရိပ်ကို မြင်လျှင်၊ အမှတ်မထင် ဝေဝေဝါး၊့့၊ ဘဝပမာလေလာ့း့၊ တင်စားမိသည်၊ ဆီးတားကာဝှက်၊ လ-ရက်-နာရီ၊ အချိန်မင်ရည့့်၊ အုံ့ကာဆိုင်းလို့ မပီ့့၊ တပိုင်းပြယ်လွင့်၊ နွေအဖွင့်သို့ လေသင့်ရာလျော့့ မြော့့ ရွှေရင့်လွှာသိင်္ဂီ့့
တင်ထားတာ ၃ ရက်သာရှိသေး။ အခု ပို့စ်တခုကနေ ထောက်ပြတာတွေ့ရတယ်။ တပြည်သူကို သပြေသူလို့ မှားနေတာ တွေ့တယ်။ ရုပ်ရှင်အမည်က ဘယ်လိုလဲတော့ ကျွန်တော် မသိပါ။ ဝတ္ထုအမည်ကတော့ တပြည်သူ မရွှေထား။
ပုဂ္ဂလပညတ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
၃၂။ နှစ်ဘဝသုံးဘဝ စသည် တမျိုးမှတမျိုး၌ဖြစ်၍ ပဋိသန္ဓေနေသော ကောလံကောလ ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ဤလောက၌ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည် သုံးပါးသောသံယောဇဉ်တို့၏ ကုန်ခြင်းကြောင့် သောတာပန်ဖြစ်၏။ အပါယ်လေးပါးသို့ ကျခြင်းသဘောမရှိ။ ကိန်းသေမြဲ၏။ အထက်မဂ်သုံးပါးလျှင် လည်းလျောင်းရာ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် နှစ်ဘဝ၎င်း သုံးဘဝ၎င်း အမျိုးမျိုးတို့၌ ကျင်လည်ပြေးသွား၍ ဆင်းရဲ၏အဆုံးကိုပြု၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို နှစ်ဘဝ သုံးဘဝသည် တမျိုးမှတမျိုး၌ဖြစ်၍ ပဋိသန္ဓေနေသော ကောလံကောလပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
၃၃။ တဘဝသာ ပဋိသန္ဓေမျိုးစေ့ရှိသော ဧကဗီဇီပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ဤလောက၌ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည် သုံးပါးသောသံယောဇဉ်တို့၏ ကုန်ခြင်းကြောင့် သောတာပန်ဖြစ်၏။ အပါယ်လေးပါးသို့ ကျခြင်းသဘောမရှိ။ ကိန်းသေမြဲ၏။ အထက်မဂ်သုံးပါးလျှင် လည်းလျောင်းရာ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် တကြိမ်သာလျှင် လူ့ဘဝ၌ဖြစ်၍ ဆင်းရဲ၏အဆုံးကိုပြု၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို တဘဝသာလျှင် ပဋိသန္ဓေမျိုးစေ့ရှိသော ဧကဗီဇီပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
တစ်မျိုးမှတစ်မျိုး၌ဖြစ်၍ မဟုတ်။ တစ်ဘဝသာ မဟုတ်။ တစ်ကြိမ်သာလျှင် မဟုတ်။ တစ်ဘဝသာလျှင် မဟုတ်။
ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ဆရာတော်ကြီးများထက် မြန်မာစာ တော်ကြတတ်ကြကုန်သော မြန်မာစာဆရာကြီးများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများသိစေရန်
ကထာဝတ္ထုပါဠိတော် မြန်မာပြန် ပဌမတွဲ
သကဝါဒီ။ အမိဖြစ်၍ အမိမဟုတ်သော တစုံတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှိပါသလော။
ပရဝါဒီ။ သြော် ရှိပါ၏။
သကဝါဒီ။ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သော တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှိပါသလော။
ပရဝါဒီ။ ဤသို့ကား မဆိုသင့်ပေ။
သကဝါဒီ။ အဖဖြစ်၍ အစ်ကိုညီဖြစ်၍ အစ်မ နှမ ညီမဖြစ်၍ မင်းမျိုးဖြစ်ပုဏ္ဏားမျိုးဖြစ်၍ ကုန်သည်မျိုးဖြစ်၍ သူဆင်းရဲမျိုးဖြစ်၍ အိမ်၌နေသူလူဖြစ်၍ နတ်ဖြစ်၍ လူမဟုတ်သော တစုံတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှိပါသလော။
တစ်စုံတစ်ယောက်သော မဟုတ်။ ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ဆရာတော်ကြီးများထက် မြန်မာစာ တော်ကြတတ်ကြကုန်သော မြန်မာစာဆရာကြီးများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများသိစေရန်
Riskiest Medical Procedures သတိကြီးသင့်တဲ့ ခွဲစိတ်ကုသနည်း ၁၅ မျိုး
ခွဲစိတ်ဓါးကို လူတိုင်းက ကြောက်စိတ်ရှိကြတယ်။ ခွဲပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုလည်း သိတာမဟုတ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုကနေ နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်မလဲ သေချာမသိ။ ဘေးကပြောတာတွေကလည်း တယောက်တမျိုး။ စိုးရိမ်စိတ်ကို လိုတာထက် မပိုသင့်ပါ။ တကယ်သိသင့်တာတွေတော့ သိထားသင့်တယ်။ ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာတွေဟာ ယေဘုယျပြောရရင် စိတ်ချရတာတွေဖြစ်တယ်။ လေ့လာမှုလုပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတခုကို ကိုးကားပြီး ရေးပါရစေ။ အလွန်သတိကြီးဖို့လိုအပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုနဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနည်းတွေရှိတယ်။ ၁၅ မျိုးကိုရွေးပါမယ်။ တချို့နည်းတွေ မြန်မာပြည်မှာ လုပ် မလုပ် မသိပါ။
1. Breast Reduction ရင်သားသေးအောင်လုပ်ခြင်းခွဲစိတ်ခြင်း
2. CT Scan စီတီစကန် ရိုက်ခြင်း
3. Organ Transplant ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးခြင်း
4. Penile Enlargement ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း
5. Epilepsy Surgery အတက်ရောဂါ ခွဲစိတ်မှု
6. Transvaginal Mesh အမျိုးသမီး ဗဂျိုင်းနာထဲ ဇကာထည့်ခြင်း
7. Gastric Bypass အစာအိမ် ဘိုင်ပတ်စ် ခွဲစိတ်ခြင်း
8. Spinal Tap ခါးရိုးဆစ်အရည် ဖေါက်ခြင်း
9. Cesarean Section ဗိုက်ခွဲ ကလေးမွေးခြင်း
10. Circumcision ပန်းအဖျား ဖြတ်ခြင်း
11. Cancer Operations ကင်ဆာအတွက် ခွဲစိတ်ခြင်း
12. Brain Surgery ဦးနှောက် ခွဲစိတ်ခြင်း
13. Abdominal Exploration ဗိုက်ကို စူးစမ်းခွဲစိတ်ခြင်း
14. Pancreatectomy သရက်ရွက် ဖြတ်ထုတ်ခြင်း
15. Stents စတန့် ထည့်ခြင်း